I-Semalt Analytics: Innovation kunye neNguqulelo yeDivamenti Kwihlabathi leNamhlanje lezo shishino
Uguquko lweDigital (owaziwa nangokuphazamiseka okanye utshintsho lwezoshishino) lubhekiselaukutshintshwa kwamashishini kunye neendlela zabo zokusebenza kwintsimi yezobuchwepheshe ngenkqubela imveli ifumana neenguqulelo.Ukuguqulwa kweDigital kubalulekile kuzo zonke iintlobo zamashishini nokuba ibhizinisi elincinane, eliphakathi okanye elikhulu. Ngaloo ndlela, ukuphazamiseka kuya kubawabungqina kwizonyango, kwivenkile, kwesoftware, kwizinto zokusebenza okanye kwendawo yokuzenzekelayo. Ukusetyenziswa kwezinto ezintsha kwishishini kubalulekileyo ekuhambiseni i-aamava amashishini amashishini amakhulu kunye nabathengi - vps peru sac.
uLitter Mitchell, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt ,inika ingqiqo malunga nendlela ezintsha eziguqula umhlaba wezoshishino namhlanje.
Indlela efanelekileyo yokuhlala phambili kwintcintiswano kwilizwe lalo xesha liza kuba naloukukwazi ukuhambisa izicelo ezinokwenziwa ngokwezifiso kwi-business. Inqununu yenguqu yedijithali isekelwe ekuphuculeniamava kumakhasimende kunye neendleko zokunciphisa imisebenzi. Nangona kunjalo, utshintsho lwezedijithali lungaphezulu kokuphucula iteknoloji entsha. Kwakhonamalunga nenkcubeko.
Imibutho kufuneka ibhekane neemfuno zamashishini ezinamandla, utshintsho kwishishinikwimeko kunye nokuphucula iindlela zanamhlanje. I-IT (iTeknoloji yoLwazi) iikholi kunye neenkokheli nakowuphi na ishishini kufuneka lisebenzisane ngokuhambaekuqhubekeni kokuqhubela phambili, ukuqhuba ukutsha nokuhlangabezana neemfuno zezoshishino. Okubalulekileyo, oko kukuguqula utshintshi-ngaphantsiindleko, ukukhawuleza imisebenzi yezoshishino, ivelise utshintsho oluhle kwimimodeli yobungcali, abantu kunye neenkqubo kunye nokuphucula ixesha lokuthengisa.
Izinto eziphambili ezibangela ukuguqulwa kwamashishini kufaka imfuno yerhwebo, umthengiukuziphatha, iteknoloji entsha kunye neemeko zendalo. Ukuphuculwa kwezobuchwepheshe kubangela ukuguqulwa kwamashishini kwezobuchwepheshe.I-logistics yezoshishino kufuneka ithathe iteknoloji entsha njengelifu, i-RAD, i-IOT kunye nedatha enkulu kwaye iguquke kwiinkqubo zelifa..Ukongezelela,Izinto ezintsha zobuchwepheshe zivunyiwe ngokubanzi kwinkqubo. Bandisa ukwanda kwexesha, banikezela iziphumo ezinempumelelo, ixabiso eliphantsikwaye zizise intengo kwi shishini.
Ukuziphatha kwabaThengi ngenye into ebalulekileyo ekuguqulweni kwedijithali.Ziziphi iimfuno zabaxhasi kunye neemfuno ezivela kwintlangano (kunye neemfuno zobuchwepheshe ekuhlangabezaneni neemfuno zezoshishino)? Abaxhasi bafunaukuphuculwa kwamandla ezobuchwepheshe kunye kunye nesicelo sokwenza lula ukusetyenziswa. Kule nkalo, amashishini kufuneka abhekane nemibandela yangaphandlenjengoko uguquko lwezoqoqosho, iimfuno zeqabane zoshishino, ukhuphiswano lweemarike kunye nemithetho yolawulo. Iimfuno zabathengi kunye nekhono lobuchwephesheekutyeni iimfuno ezibaluleke kakhulu. Ngokomzekelo, iindleko eziphantsi kunye nezakhono eziphuculweyo ziphumo ezimbini ezibonakalayo.Ngaphezulu, i-Forrester Consulting yophando eyenziwe yi-Accenture Interactive, yamisela abaqhubi abakhulu beenguqu zoshishinonjengokwaneliseka kwabathengi, ukwandisa isantya seengcamango nokuzuza.
Utshintsho oluyimpumelelo oluxakekileyo luxhomekeke kwintlangano yanamhlanjeinkcubeko kunye nokukhula kwedijithali. Ezi nkcukacha zigqatswa apha ngezantsi:
Umthengi ufuna. Abaxhasi bajonge phambili ngamava amnandi kuzo zonkekwinkalo yokuhambisa. Ngaloo ndlela, qinisekisa ukuba umbutho wakho ufezekisa ukunyaniseka kwabathengi kunye nabaxhasi baya kuthi bathethe njalo ngelophawu.
Ukuqhelaniswa kwenkqubo. Umqeshwa unike amandla kunye nokuphucula ukukhishwa kwamananiUkwenza izigqibo ezithathwe ngedatha ngokubangela ukuba kusebenze ngokubanzi ukusebenza kunye nokusebenza okukhulu.
Ibhizinisi elitsha. Ukuqwalasela imizekelo yezolimo okanye idijithali entshaiimveliso, ezithatha ngaphaya kweemfuno zezoshishino ezikhokelela ekutshintsheni iimfuno zoshishino kwaye zikhuthaza iinkonzo ezintsha kunye nemveliso.
Ekugqibeleni, ukuguqulwa kwedijithali yinguqu yonyani ebangela isiphephokwilizwe lequmrhu. Impembelelo yenguqu yoshishino ibonakaliswe kuphela kwimisebenzi kodwa nakwezinye iinqanaba zombuthonezakhiwo zoshishino. Ii-CIO kunye neenkokheli zoshishino ziye zenyuka ukuqinisekisa ukuqinisekisa ukuba utshintsho kunye nokuguqulwa kwezoshishinoukuqhuba ibhizinisi, ukuhambisa ixabiso kunye nokuzisa utshintsho oluvelisayo.